Visa Canada | Canada Visa Online | Visa ndị njem nlegharị anya Canada
Visa Canada maka ndị nwere kaadị Green US
Visa Canada maka ụmụ amaala Britain
Visa Canada maka ụmụ amaala Spanish
Visa Canada maka Citizmụ amaala France
Visa Canada maka ụmụ amaala Israel
Visa Canada maka Citizmụ amaala Italiantali
Visa Canada maka ụmụ amaala South Korea
Visa Canada maka ụmụ amaala Portuguese
Visa Canada maka ụmụ amaala Chile
Usoro ntinye nke Canada eTA
Ngwa Visa eTA Canada
Canada chọrọ chọrọ
Ihe ndị chọrọ ịbanye Canada
Canada eTA .dị
Jiri kaadị Green Green US gaa Canada
Visa njem nlegharị anya nke Canada
Gaa Canada na azụmahịa
Nnukwu Visa Canada
Na-arụ ọrụ ezumike Visa Canada
Visa Canada maka Ndị Ọgwụ Ahụike
Nzọụkwụ ndị ọzọ - Mgbe eTA Canada Visa
Eziokwu gbasara Canada
B CR C CLỌ COLUMBIA
ỌGB BR ỌZỌ
ỤLỌMA NA CANADA
OBE EGWU NA CANADA
Ebe kacha mma n'oge oyi na Canada
Ebe kacha elu ịgba ọsọ
Ọdọ mmiri ndị dị egwu na Canada
Ileta The Rocky Ugwu
Ntuziaka njem na Niagara Falls
Ebe ihe nketa ụwa
Ememe Oktoberfest na Canada
Hockey Ice na Canada
Ọzara Canada dị ịtụnanya
Njem Canada na -adigide
Mgbụsị akwụkwọ na Canada
Nkume zoro ezo nke Canada
Oke Canada na US ga-emepe ọzọ
Covid-19: Canada ekpughere paspọtụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa
Covid-19: Canada na-ebelata mmachi njem
Mgbakwunye Visa maka ụmụ akwụkwọ mba ụwa
Canada eTA Ikike
Ngwa Canada eta
Canada eTA (ikike ikike njem njem eletrọniki)
eTA Canada Visa (Canada Visa Online) bụ ikike njem achọrọ maka ndị njem na-eleta Canada maka azụmahịa, njem nlegharị anya ma ọ bụ ebumnuche njem. Emebere usoro ịntanetị a maka Visa eletrọnịkị maka Canada site na Ọgọst 2015 site na Gọọmentị Canada, na ebumnobi nke ime ka ndị njem ọ bụla ruru eru n'ọdịnihu tinye akwụkwọ maka eTA na Canada.
eTA Canada (Canada Visa Online) bụ ikike njem achọrọ maka ndị njem na-eleta Canada maka azụmahịa, njem nlegharị anya ma ọ bụ ebumnuche njem. Emebere usoro ịntanetị a maka Visa eletrọnịkị maka Canada site na Ọgọst 2015 site na Gọọmentị Canada.
1. Ngwa eTA zuru ezu
2. Nweta eTA site na email
3. Banye Canada
Kedu ihe bụ Canada eTA ma ọ bụ Canada Visa Online?
Dịka akụkụ nke nkwekọrịta ya na United States iji dozie oke ala abụọ ahụ, site na Ọgọstụ 2015 gaa Canada malitere Ihe omume Visa Waiver maka ụfọdụ mba ndị Visa anaghị akwụ ụgwọ ụmụ amaala ya nwere ike ịga Canada site na itinye akwụkwọ maka ikike ikike njem eletrọnịkị kama, nke a maara dị ka eTA maka Canada ma ọ bụ Canada Visa N'ịntanetị.
The Canada Visa Online na-arụ ọrụ dị ka akwụkwọ Visa Waiver maka ndị si mba ọzọ sitere na mba ụfọdụ tozuru oke (Visa Exempt) ndị nwere ike ịga Canada na-enweghị inweta Visa n'aka ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ Canada ma ọ bụ Consulate mana kama gaa na obodo ahụ na eTA maka Canada nke nwere ike. tinye akwụkwọ maka ma nweta ịntanetị.
Canada eTA na-arụ otu ọrụ dị ka Visa Canada mana ọ na-enwetakarị ọfụma ma usoro ahụ dịkwa ọsọ ọsọ. Canada eTA dị irè maka naanị azụmaahịa, njem nlegharị anya ma ọ bụ njem.
Oge ndaba nke eTA gị dị iche na oge ịnọ. Ọ bụ ezie na eTA dị irè maka afọ 5, oge ị nwere ike agaghị agafe ọnwa 6. Inwere ike ịbanye Canada n'oge ọ bụla n'ime oge nkwado.
Ọ bụ ngwa ngwa usoro nke chọrọ ka ị na-ejuputa ihe Applicationdị Visa Visa Canada n'ịntanetị, nke a nwere ike pere mpe nkeji ise (5) iji mezue. A na -enye Canada eTA mgbe emechara akwụkwọ anamachọihe nke ọma yana onye na -achọ akwụkwọ kwụrụ ụgwọ ya n'ịntanetị.
Onye na -ahụ maka ọrụ (CBSA) nke Canada
Kedu ihe bụ ngwa Visa Canada?
Ngwa Visa Canada bụ akwụkwọ eletrọnịkị dị n'ịntanetị dị ka ndị Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC tụrụ aro), nke ndị chọrọ ịbanye Canada ga-emecha maka njem dị mkpirikpi.
Ngwa Visa Canada a bụ nnọchi nke usoro dabere na akwụkwọ. Ọzọkwa, ị nwere ike chekwaa njem na Embassy Canada, n'ihi na a na-enye Canada Visa Online (eTA Canada) site na email megide nkọwa paspọtụ gị. Ọtụtụ ndị na-achọ akwụkwọ nwere ike mejupụta Ngwa Visa Canada n'ịntanetị n'ihe na-erughị nkeji ise, yana nkụda mmụọ na-ada ha Gọọmentị Canada site na ịga na Embassy Canada iji tinye usoro dabere na akwụkwọ. Ị chọrọ ihe nchọgharị ejikọrọ na ịntanetị, adreesị ozi-e na Paypal ma ọ bụ kaadị kredit/Debit iji kwụọ ụgwọ n'ịntanetị.
Otu oge, Ngwa Visa Canada juputara na ntanetị na nke a website, ndị Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) na-enyocha ya ka ịlele njirimara gị. A na-ekpebi ọtụtụ ngwa Visa Canada n'okpuru awa 24 na ụfọdụ nwere ike were ihe ruru awa iri asaa na abụọ. A na-agwa gị mkpebi nke Canada Visa Online site na adreesị ozi-e enyere.
Ozugbo ekpebiela nsonaazụ Canada Visa Online, ị nwere ike idobe ndekọ email na ekwentị gị ma ọ bụ bipụta ya tupu ịga na ụgbọ mmiri Cruise ma ọ bụ ọdụ ụgbọ elu. Ịchọghị stampụ ọ bụla na paspọtụ gị n'ihi na ndị ọrụ mbata na ọpụpụ ọdụ ụgbọ elu ga-enyocha visa gị na kọmputa. Ịkwesịrị ijide n'aka na nkọwa ndị jupụtara na Canada Visa Ngwa na webụsaịtị a ga-adabarịrị kpọmkwem na aha mbụ gị, nna nna gị, data ọmụmụ gị, nọmba paspọtụ na mbipụta paspọtụ na ụbọchị njedebe paspọtụ iji zere ịjụ gị n'ọdụ ụgbọ elu. oge nke ịbanye ụgbọ elu.
Onye nwere ike itinye akwụkwọ maka Canada Visa Online (ma ọ bụ Canada eTA)
Naanị ụmụ amaala nke mba ndị a bụ ewepụrụ site na inweta Visa iji gaa Canada ma gha itinye akwụkwọ maka eTA na Canada.
Mụ amaala Canada na United States chọrọ naanị akwụkwọ ikike Canada ma ọ bụ US Passports iji gaa Canada. US iwu kwadoro na-adịgide adịgide binanso, na wɔn adwene yɛ wɔn sɛ US Green Kaadị, ga-etinye akwụkwọ maka Canada eTA.
Naanị ndị ọbịa ahụ na-eme njem na Canada site na ikuku site na ụgbọ elu azụmahịa ma ọ bụ nke akwụ ụgwọ kwesịrị itinye maka eTA na Canada.
Br. Virgin bụ.
Obodo Vatican City
Dị Canada eTA
Canada eTA nwere ụdị anọ, ma ọ bụ na okwu ndị ọzọ, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka Canada eTA mgbe ebumnuche ị gara mba ahụ bụ otu n'ime ihe ndị a:
Zọ njem ma ọ bụ nkwụsị mgbe ị ga-akwụsị na ọdụ ụgbọ elu Canada ma ọ bụ obodo maka oge dị mkpirikpi ruo ụgbọ elu ọzọ ị ga-aga ebe ikpeazụ gị.
Tourism, nlegharị anya, ileta ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi, ịbịa Canada na njem ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ ịga obere ọmụmụ ihe na-anaghị enye otuto ọ bụla.
n'ihi na azụmahịa ebumnuche, gụnyere nzukọ azụmahịa, azụmaahịa, ọkachamara, sayensị, ma ọ bụ ọgbakọ mmụta ma ọ bụ mgbakọ, ma ọ bụ maka idozi ihe omume nke ala na ụlọ.
n'ihi na ọgwụgwọ ahụike n’otu ụlọ ọgwụ dị na Canada.
Ozi achọrọ maka Canada eTA
Ndị chọrọ Canada eTA ga-achọ ịnye ozi ndị a n'oge edejupụtara n'ịntanetị Applicationdị Ngwa Canada eTA:
Ozi nkeonwe dị ka aha, ebe amụrụ, ụbọchị ọmụmụ
Nọmba paspọtụ, ụbọchị enyere, ụbọchị mmebi
Ozi kọntaktị dị ka adreesị na email
Tupu itinye akwụkwọ maka Canada eTA
Ndị njem bu n'obi itinye akwụkwọ maka ntanetị Canada eTA ga-emerịrị ọnọdụ ndị a:
Paspọtụ ziri ezi maka njem
Akwụkwọ ikike ngafe nke onye na-achọ ọrụ ga-adị ire ma ọ dịkarịa ala ọnwa atọ gafere ụbọchị ọpụpụ, ụbọchị mgbe ị hapụrụ Canada.
E kwesịkwara inwe oghere dị na paspọtụ ahụ ka Onye Ọrụ Omenala wee zọọ paspọtụ gị.
ETA gị maka Canada, ọ bụrụ na anabatara ya, ga-ejikọ ya na Paspọtụ ziri ezi gị, yabụ achọrọ ka ị nweta Paspọtụ ziri ezi, nke nwere ike ịbụ ma ọ bụ Akwụkwọ ikike nkịtị, ma ọ bụ onye ọrụ gọọmentị, diplọmatị, ma ọ bụ paspọtụ ọrụ, nke mba niile tozuru etozu .
NJ ozi Email ziri ezi
Onye anamachọ oru gha enweta Canada eTA site na email, ya mere achoro ID nke oma ka achota Canada eTA. Dị nwere ike mezue ndị ọbịa na-ezube ịbịa site na ịpị ebe a ETA Canada Visa Ngwa akwụkwọ.
ebe ọ bụ na eTA Canada Site na ngwa ngwa enwere naanị na ntanetị, na-enweghị mpempe akwụkwọ, achọrọ kaadị akwụmụgwọ / debit ma ọ bụ akaụntụ PayPal.
Itinye akwụkwọ maka Canada eTA
Ndị amaala mba ọzọ tozuru oke chọrọ ịga Canada kwesịrị itinye akwụkwọ maka eTA maka Canada n'ịntanetị. Usoro niile a dabere na weebụ, site na ngwa, ịkwụ ụgwọ, na nrubeisi ka emee ka ị mata banyere nsonaazụ nke ngwa ahụ. Onye anamachọ ihe gha aghajuputa udiri akwukwo Canada eTA na nkowa di nkpa, tinyere nkowa ndi meturu ya, ihe ndi njem gara aga, nkowa banyere paspọt, na ihe omuma ndi ozo dika ihe banyere aru ike na ihe ojoo. Ndị niile na-aga Canada, n'agbanyeghị afọ ole ha dị, ga-edejupụta fọm a. Ozugbo o juru, onye nyocha ahụ ga-akwụ ụgwọ ngwa eTA site na iji kredit ma ọ bụ kaadị debit wee nyefee ngwa ahụ. A na-eme ọtụtụ mkpebi n’ime awa iri abụọ na anọ wee mee ka onye na-arịọ arịrịọ zitere ya ozi email mana ụfọdụ nwere ike were ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu iji hazie ya. Ọ kachasị mma itinye akwụkwọ maka eTA maka Kanada ozugbo ị mechara atụmatụ njem gị na karịa 72 awa tupu oge ị banye Canada . A ga-amara gị ọkwa maka mkpebi ikpeazụ site na email ma ọ bụrụ na ịnabataghị akwụkwọ gị, ịnwere ike ịnwale itinye akwụkwọ maka Visa Canada.
Ogologo oge ole ka Canada eTA ngwa ga-aha
Ọ bụ ihe amamihe dị na itinye akwụkwọ maka Canada eTA opekata mpe awa 72 tupu ị na-ezube ịbanye mba ahụ.
Ndaba nke Canada eTA
ETA maka Canada bụ Dị irè maka afọ 5 site na ụbọchị mbipụta ya ma ọ bụ nke pere mpe ma ọ bụrụ na Paspọtụ ọ na-ejikọ ya na kọmputa ga-akwụsị tupu afọ 5. The eTA na-enye gị ohere ịnọ na Canada maka nke kachasị nke ọnwa 6 n'otu oge mana inwere ike iji ya leta mba ugboro ugboro n’ime oge nkwado ya. Agbanyeghị, ndị ọrụ oke ga-ekpebi oge a ga-ahapụ gị ka ị nọrọ n'ime oge dabere na ebumnuche gị nke ịbịa ma zọọ ya na Paspọtụ gị.
Achọrọ ka eTA maka Canada ka ị nwee ike banye ụgbọ elu na Canada n'ihi na enweghị ya ị nweghị ike ịbanye n'ụgbọ elu agbago Canada ọ bụla. Agbanyeghị, Immigrashọn, ndị gbara ọsọ ndụ na ụmụ amaala Canada (IRCC) ma ọ bụ na Ndị ọrụ na -ahụ maka ókèala Canada nwere ike ịgọnahụ ịbanye na ọdụ ụgbọ elu ọbụlagodi na ị bụ onye njide eTA Canada akwadoro ma ọ bụrụ na ntinye:
ị nweghị akwụkwọ gị niile, dị ka paspọtụ gị n'usoro, nke ndị ọrụ mpaghara ga -enyocha ya
ọ bụrụ na ị nwere ahụike ma ọ bụ ego ọ bụla
ma ọ bụrụ na ị nwere akụkọ mpụ/ndị na -eyi ọha egwu gara aga ma ọ bụ okwu mbata na ọpụpụ gara aga
Ọ bụrụ na ị haziela akwụkwọ niile achọrọ maka Canada eTA wee zute ọnọdụ ntozu niile maka eTA maka Canada, mgbe ahụ ị dịla njikere. tinye akwụkwọ maka Canada Visa Online onye akwụkwọ anamachọihe ya dị nnọọ mfe ma kwụ ọtọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ nkọwapụta ọ bụla ị ga-emerịrị kpọtụrụ helpdesk anyị maka nkwado na nduzi.
Enwere ike ịjụ akwụkwọ anamachọihe nke Canada Visa Online n'ókè Canada
Ofzọ nke ịkwado onwe ha
Enwere ike ịgwa onye na-arịọ arịrịọ ka o nye ihe akaebe na ha nwere ike ịkwado ego ma kwado onwe ha n'oge ha nọrọ na Canada.
Gaa / tiketi ụgbọ elu laghachi.
Enwere ike ịchọrọ onye na-arịọ arịrịọ iji gosipụta na ha bu n'obi ịhapụ Canada mgbe ebumnuche njem nke Canada eTA tinyechara.
Ọ bụrụ na onye nyocha ahụ enweghị tiketi na-aga n'ihu, ha nwere ike ịnye akaebe nke ego na ikike ịzụta tiketi n'ọdịnihu.
Uru Ntinye Ntanetị
Naanị ụfọdụ n'ime uru ndị dị oke mkpa maka itinye akwụkwọ gị na Canada
Ngwa 24/365 dị n'ịntanetị.
Enweghị oge ọ bụla.
Ntughari ngwa na ndozi site na ndi okacha visa tupu ntinye.
Usoro eji arụ ọrụ.
Nzizi nke ihe na-ezighi ezi ma obu ezighi ezi.
Nchedo nzuzo na ụdị echedoro.
Nyocha na nkwado nke ozi ndị ọzọ achọrọ.
Nkwado na Enyemaka 24/7 site na E-mail.
Mgbake Email nke eVisa gi n’agha.
Nkwụghachi ụgwọ maka ọrụ ma ọ bụrụ na ajụrụ gị eVisa.
eTA ELIGIBILE Mba
eTA IWU usoro
Ngwa eTA CANADA VISA
CANADA eTA chọrọ
CANADA eTA YLỌ
CANADA Onye nleta visa
CANADA VISA Kaadị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
MGBE ETA CANADA VISA
Canada na-arụ ọrụ ezumike VISA
Ozi ihu igwe
ALA AKWỤKWỌ MAAPLE
OKTOBERFEST NA CANADA
SUSTAINABLE CANADA Njem
Ice hokesi ke Canada
DESERTS KE CANADIAN maka ndị ọbịa
Nduzi ndị njem nlegharị anya na CANADA ATLANTIC
LA CANADA - Agwaetiti MAGDALEN
ụsọ osimiri na Montreal
Ekwesịrị ịhụ ọhụụ ọhụrụ
Ekwesịrị ịhụ NEWFOUNDLAND & LABRADOR
© nwebisiinka site na www.canada-visa-online.org
Disclaimer: ETA Canada nke webụsaịtị azụmaahịa a na-etinye n'ọrụ ozugbo na weebụsaịtị gọọmentị Canada. Immigrashọn, ndị gbara ọsọ ndụ na ụmụ amaala Canada (IRCC) ahọpụtaghị www.canada-visa-online.org ozugbo, n'ụzọ na-enweghị isi ma ọ bụ naanị. A na-akwụ ụgwọ ego ọkachamara maka ọrụ anyị na Visa Levy Gọọmentị maka ndị na-etinye na weebụsaịtị a.